Nidaamka daawada lagu taliyay ee broilers
1. 1-7 maalmood jir: dawayn qabow: 0.2ml/pc cabitaanka ugu horreeya. u adeegso 3-5 maalmood oo joogto ah 1-5 maalmood jir: daaweynta proventriculitis: 500g isku dar 100 kg oo quudin ah. Isticmaal 5 maalmood si joogto ah. Ka -hortagga iyo daaweynta: Hagaajinta iska caabbinta jirka, adenomyosis gastritis, yareynta xakamaynta difaaca, iyo hubinta ...
“Guud ahaan, waxaa jira 12,807 nooc oo ah qalabka dawooyinka Shiinaha iyo 1,581 nooc oo dawooyinka xoolaha ah, oo qiyaastii ah 12%. Khayraadkaas, 161 nooc oo xayawaanka duurjoogta ah ayaa halis ku jira. Waxaa ka mid ah, geeska wiyisha, lafta shabeelka, miski iyo budada bile ayaa loo arkaa inay yihiin duur -joog dhif ah ...
Dhab ahaantii, hadda soo kabashada suuqa digaagga ayaa waliba xisaabin kara. Qiimaha badeecooyin badan oo digaaga ayaa gaadhay heer isla muddadii sannadihii hore, qaarkood waxay ka sarreeyeen xitaa qiimihii celceliska sanadihii hore. Laakiin sidaas oo ay tahay, dad badani weli kuma dhiirran inay dhalaan, taasi waa sababta ...
Farqiga u dhexeeya quudinta isku -darka iyo quudinta premix
by admin 20-09-30
Beeralayda digaagga si ay u doortaan quudinta ama waa, marka loo eego noocyada kala duwan ee digaagga, koritaanka xaaladda la dooranayo. Habka xulashada jirka loo baahan yahay waa sida soo socota: Quudinta isku -dhafan waa nooc ka mid ah badeecada quudinta oo leh qiime nafaqo oo dhammaystiran iyadoo loo eegayo noocyada kala duwan ...